အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျမြားပွောပွတဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှ ကွှကျနို့ဖယျရှားခွငျးအကွောငျး။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျမြားပွောပွတဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှ ကွှကျနို့ဖယျရှားခွငျးအကွောငျး။
အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျမြားပွောပွတဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှ ကွှကျနို့ဖယျရှားခွငျးအကွောငျး။
ကွှကျနို့တှဟော အသကျအန်တရာယျမရှိဘူးဆိုပွီး ဂရုမစိုကျဘဲ မနသေငျ့ပါဘူး။
သငျအသကျကွီိးလာတာနဲ့အမြှ သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ကွှကျနို့သေးသေးလတှေေ ထှကျပျေါလာတတျပါတယျ။ အရပွေားအရငျးဖကျမှာ ပါးလှာပွီး ထိပျဖကျမှာ ကွီးနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ကွှကျနို့ထှကျလာတာကို အလှယျတကူ သိရှိနိုငျပါတယျ။ ကွှကျနို့တှဟော ကငျဆာဖုတှလေို မနာကငျြနိုငျသလို အန်တရာယျလညျး မရှိပါဘူး။
လကျမောငျးအောကျနဲ့ လညျပငျးတှမှောရှိတဲ့ ကွှကျနိျု့တှဟော အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ပိုမိုကွီးထှားလာနိုငျတယျလို့ Weill Cornel Medical College ရဲ့ လကျထောကျပရျောဖကျဆာ Anthony Rossi က ပွောပွထားပါတယျ။ “ လူတှဟော သူတို့သိသမြှနညျးလမျးအစုံသုံးပွီးတော့ ကွှကျနို့ကိုဖယျရှားဖို့ ကွိုးစားကွပါတယျ။ လကျနဲ့ ကုတျဖဲ့ခွငျး၊ မီးရှို့ဖို့ ကွိုးစားခွငျး၊ အားနဲ့ ဆောငျ့ဆှဲခွငျးတို့ဟာ အရမျးကို ဆိုးရှားတဲ့ နညျးလမျးတှပေဲ . . . ” ဖွဈတယျလို့ Dr. Rossi မှ ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျကသာလြှငျ ကွှကျနို့ကို မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ မှနျမှနျကနျကနျ ဖယျရှားပေးနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။ “ ကွှကျနို့ဖယျတာဟာ သငျ့ကိုယျသငျ အရမျးလှယျကူတယျလို့ ထငျနပွေီမလား ? ? ? မထငျလိုကျပါနဲ့။ လူတဈယောကျဟာ ကိုယျ့ဆံပငျကိုယျ ပွနျညှပျနသေလိုမြိုးပါပဲ၊ ဘယျတော့မှ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ပုံစံမြိုး ရမှာမဟုတျပါဘူး . . . ” ဆိုပွီး Dr. Rossi မှ ဆကျလကျရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျတှမှောတော့ သကျဆိုငျတဲ့ ကိရိယာတနျဆာပလာတှနေဲ့ ဖယျရှားပေးတာဖွဈပွီး ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ဖယျရှားမယျဆိုရငျတော့ နညျးလမျးမမှနျပါက ပိုမိုကူးစကျတတျပါတယျ။ ဆရာဝနျတှကေ လိုအပျတဲ့ အကူပစ်စညျးတှဖွေဈတဲ့ ပိုးသတျဆေး၊ ထုံဆေးတှအေသုံးပွုပွီး ဖယျရှားပေးတာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ စိတျခရြပါတယျ။ သာမနျဆေးခနျးတှတေောငျမှ ကွှကျနို့ကိုဖယျရှားပေးဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
ကွှကျနို့ကိုဖယျရှားဖို့အတှကျ ကြှမျးကငျြဆရာဝနျတှဆေီမှာ ပွုလုပျသငျ့တဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျးတဈခုကတော့ ထိုကွှကျနို့ကို ဖယျရှားပွီးနောကျပိုငျး ထပျထှကျလာနိုငျခွရှေိမရှိ Microscope အသုံးပွုပွီး စဈဆေးပေးတဲ့အတှကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ “ ဘာလို့ Microscope နဲ့ စဈဆေးသငျ့လဲဆိုတော့ တဈခြို့အဖုလေးတှကေ ကွှကျနို့လို့ထငျရပမေယျ့ တကမျးတမျးကတြော့ ကငျဆာအဖုတှေ ဖွဈနနေိုငျလို့ပဲဖွဈပါတယျ . . .” ဆိုပွီး Dr. Rossi မှ ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ Dr. Rossi ပွောပုံကိုကွညျ့ပွီး သငျ့အနနေဲ့ အရမျးကွီးမလနျ့သှားပါနဲ့။ နောကျပွီး အရပွေားဆရာဝနျဆီသှားပွီး ကွှကျနို့ကို စဈဆေးလိုကျခွငျးဖွငျ့လညျး သငျ့မှာ အရေးပွာကငျဆာနဲ့ အခွားအရပွေားနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှရှေိ၊ မရှိကို စဈဆေးနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးမြိုးရရှိနိုငျတဲ့အတှကျ တတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျဆီမှာ သှားရောကျပွသဖို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များပြောပြတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှ ကြွက်နို့ဖယ်ရှားခြင်းအကြောင်း။
ကြွက်နို့တွေဟာ အသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုပြီး ဂရုမစိုက်ဘဲ မနေသင့်ပါဘူး။
သင်အသက်ကြီိးလာတာနဲ့အမျှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကြွက်နို့သေးသေးလေတွေ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အရေပြားအရင်းဖက်မှာ ပါးလွှာပြီး ထိပ်ဖက်မှာ ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကြွက်နို့ထွက်လာတာကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်နို့တွေဟာ ကင်ဆာဖုတွေလို မနာကျင်နိုင်သလို အန္တရာယ်လည်း မရှိပါဘူး။
လက်မောင်းအောက်နဲ့ လည်ပင်းတွေမှာရှိတဲ့ ကြွက်နို့်တွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုမိုကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ Weill Cornel Medical College ရဲ့ လက်ထောက်ပရော်ဖက်ဆာ Anthony Rossi က ပြောပြထားပါတယ်။ “ လူတွေဟာ သူတို့သိသမျှနည်းလမ်းအစုံသုံးပြီးတော့ ကြွက်နို့ကိုဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ လက်နဲ့ ကုတ်ဖဲ့ခြင်း၊ မီးရှို့ဖို့ ကြိုးစားခြင်း၊ အားနဲ့ ဆောင့်ဆွဲခြင်းတို့ဟာ အရမ်းကို ဆိုးရွားတဲ့ နည်းလမ်းတွေပဲ . . . ” ဖြစ်တယ်လို့ Dr. Rossi မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကသာလျှင် ကြွက်နို့ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ ကြွက်နို့ဖယ်တာဟာ သင့်ကိုယ်သင် အရမ်းလွယ်ကူတယ်လို့ ထင်နေပြီမလား ? ? ? မထင်လိုက်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ဆံပင်ကိုယ် ပြန်ညှပ်နေသလိုမျိုးပါပဲ၊ ဘယ်တော့မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ရမှာမဟုတ်ပါဘူး . . . ” ဆိုပြီး Dr. Rossi မှ ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်တွေမှာတော့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေနဲ့ ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်တော့ နည်းလမ်းမမှန်ပါက ပိုမိုကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက လိုအပ်တဲ့ အကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေး၊ ထုံဆေးတွေအသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ စိတ်ချရပါတယ်။ သာမန်ဆေးခန်းတွေတောင်မှ ကြွက်နို့ကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကြွက်နို့ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေဆီမှာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ ထိုကြွက်နို့ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက်ပိုင်း ထပ်ထွက်လာနိုင်ခြေရှိမရှိ Microscope အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးပေးတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ ဘာလို့ Microscope နဲ့ စစ်ဆေးသင့်လဲဆိုတော့ တစ်ချို့အဖုလေးတွေက ကြွက်နို့လို့ထင်ရပေမယ့် တကမ်းတမ်းကျတော့ ကင်ဆာအဖုတွေ ဖြစ်နေနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် . . .” ဆိုပြီး Dr. Rossi မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Dr. Rossi ပြောပုံကိုကြည့်ပြီး သင့်အနေနဲ့ အရမ်းကြီးမလန့်သွားပါနဲ့။ နောက်ပြီး အရေပြားဆရာဝန်ဆီသွားပြီး ကြွက်နို့ကို စစ်ဆေးလိုက်ခြင်းဖြင့်လည်း သင့်မှာ အရေးပြာကင်ဆာနဲ့ အခြားအရေပြားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးရရှိနိုင်တဲ့အတွက် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်ဆီမှာ သွားရောက်ပြသဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
Next ခှေးလေးတှေ ဘာကွောငျ့ မကွာခဏ သမျးဝတေတျကွတာလဲ ? ? ?